वाइफाईको पासवर्ड, सजिलै सँग थाहा पाउने तरिका यसरी सिक्नुहोस !::Nepalese News Portal
वाइफाईको पासवर्ड, सजिलै सँग थाहा पाउने तरिका यसरी सिक्नुहोस !
अहिलेको हाईटेक लाइफमा सबैसँग समार्टफोन हुन्छ । र मोवाइल सेवाप्रदायक कम्पनीले प्रदान गर्ने २ जी, ३ जी, फोर जी तथा वाईफाईमार्फत इन्टरनेटको प्रयोग नहुने त कुरै भएन ।
यस्तोमा कुनै पब्लिक (सार्वजनिक) वाईफाईको पासवर्ड पत्ता लाग्यो भने त मज्जा नै हुने भयो । प्राय कलेज, सपिङ सेन्टर, सिनेमा हल, तथा होटेलहरुमा वाईफाई खुला रहन्छ । अर्थात् यदि यस्ता ठाउँमा जडित वाईफाईको पासवर्ड पत्ता लाग्यो भने त तपाईको काम झन सजिलो हुने नै भयो ।
सार्वजनिक वाईफाईको पासवर्ड पत्ता लगाउन के गर्ने त रु यो आलेखमा हामीले केही यस्ता मोवाइल एपबारे उल्लेख गरेका छौं, जसको प्रयोगबाट तपाईलाई सार्वजनिक वाईफाईको पासवर्ड पत्ता लगाउन मद्दत पुग्ने छ ।
बेस्ट वाई–फाई नेटवर्क ह्याकर .. यो एप बनाउने कम्पनीको दावी छ कि वाईफाईमा राखिएको जस्तोसुकै पासवर्ड पनि यो एपले तोडेर पत्ता लगाउँछ । अहिले कुनै पनि ओपन या क्लोज वाईफाई नेटवर्कको पासवर्ड पत्ता लगाउन यसको प्रयोग आमरुपमा गर्न थालिएको छ । हाऊ टु ह्याक वायरलेस नेटवर्क
यस एपलाई एक टुटोरियल जसरी लिन सकिन्छ । यसमा तपाईलाई इथिकल ह्याकिङ टिप्स सिकाइन्छ । साथै वाईफाई प्रोटेक्सनका लागि बनाइने सेकुरिटी एल्गोरिथमकलाई ह्याक गर्न पनि सिकाइन्छ । वाई–फाई ह्याकर वाई–फाई ह्याकर बीएनजी पनि एक खास पासवर्ड ब्रेकिङ एप हो । यो एप इन्सटल गरेर तपाई कुनै पनि वाईफाई नेटवर्कको रेन्जमा जानुहोस्, यसलाई तपाईको काम सजिलो बनाइदिने छ ।
ह्याक वाई–फाई पासवर्ड यो एप गुगल प्ले स्टोरमा निःशुल्क उपलब्ध छ । केही सेकेन्डमै यो एपको मद्दतबाट वाई–फाईको पासवर्ड पत्ता लगाउन सकिन्छ । यो एपलाई अहिलेसम्म १० भन्दा बढीले डाउलोड गरिसकेका छन् ।
फाइन्ड माई राउटर्स पासवर्ड .. डिफल्ट पासवर्ड रिकभरी, म्यानुअल पासवर्ड रिकभरी तथा डिक्शनरी पासवर्ड रिकभरी जस्ता सुविधाको साथमा यो एप तपाईका लागि फाइदाजनक हुनसक्छ । यदि तपाईले नयाँ राउटर किन्नु भएको छ र त्यसको पासवर्ड थाहा छैन भनेपनि तपाईले यो एप प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
पत्नीको विवाह प्रेमीसँग, उपहारमा छोरा
जहाँ ब्रा खोलेर टेलिभिजनको समाचार पढिन्छ (हेर्नुस् भिडियो)
आमाको पेटमै झगडा गरेका जुम्ल्याहा शिशुको भिडियो भाइरल (भिडियोसहित)
विवाहको अघिल्लो रात किन तनावमा हुन्छन् युवती?